Abahlinzeki be-bollard abahoqiwe neFektri - Abakhiqizi be-bollard abahoqiwe
2019 Hot Zezıhlabane Cast Aluminium Floodlight CE ROHS IP65 1 ...
Factory Direct 24h Phendula zokuhlobisa christmas emgwaqweni ...
Factory Inani Street Street Uxhumano Solar Powered ...
I-AC 85-265V Solar System Iyatholakala Umgwaqo Wezindlu we-LED ...
Ukukhanya komgwaqo we-200 Watt Led kwe-Public Lighting
I-Die Casting Aluminium Garden Lamp Pole Light Waterpro ...
ukukhanya kwangaphandle kwengadi kuholele IP66 LED Landscape Lights
35W ukukhanya kwelanga okuholeleke ngaphandle kwelanga kuhola ukukhanya 60W
ukwakheka kwesimanje okwenziwe ngezifiso i-aluminium yangaphandle yokushayela amalambu okhanyiso lwangaphandle amalambu otshani aholela ekukhanyeni kwebollard
Umzimba wesibani wenziwe nge-aluminium alloy tube kanye ne-high-strength die-casting aluminium material, futhi indawo efuthwe i-electrostatic anti-aging. Ikhava yokudlulisa ukukhanya isebenzisa impahla ye-PC engenisiwe, anti-ukuguga ne-anti-ultraviolet. Ibanga lokuvikelwa lingafinyelela ku-IP65, eliphakeme kunezibani zendabuko zotshani. Umthombo wokukhanya usakazeke endaweni ezungezile, ukuhlobisa nokusebenza okunamandla otshanini, hhayi nje ukufeza umphumela omuhle kepha nokuhola indlela. Ukufaka nokuqaqa izinto kulula, kuphephile futhi kuyayilimaza imvelo.
Ukukhanya kwe-LED Bollard kweLandscape Garden Yard Square Outdoor Lighting kwaholela ekukhanyeni kotshani
Ukukhanya kwangaphandle kwe-IP65 okungamanzi okungu-25W kwaholela ekukhanyeni kwensimu kukhanya ibollard light
Umzimba wesibani wenziwe nge-6063 aluminium alloy tube kanye ne-high-strength die-casting aluminium material, futhi ubuso bufuthwe nge-electrostatic anti-aging. Ikhava yokudlulisa ukukhanya isebenzisa impahla ye-PC engenisiwe, anti-ukuguga ne-anti-ultraviolet. Ibanga lokuvikelwa lingafinyelela ku-IP65, eliphakeme kunezibani zendabuko zotshani. Umthombo wokukhanya usakazeke endaweni ezungezile, ukuhlobisa nokusebenza okunamandla otshanini, hhayi nje ukufeza umphumela omuhle kepha nokuhola indlela. Ukufaka nokuqaqa izinto kulula, kuphephile futhi kuyayilimaza imvelo.